It is me. Ko Niknayman.: နစ်နေမန်းမှ ပြည်သူများသို့ တင်ပြချက်။
နစ်နေမန်းမှ ပြည်သူများသို့ တင်ပြချက်။
နစ်နေမန်း၏ ဘလော့များမှာ -
တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ (၃) ခုလုံးအား တွဲဘက် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ အပြင် အီးမေးလ်လိပ်စာများမှာလည်း -
ကျွန်တော်ရဲ့ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မည်သည့်ဘလော့ကိုမဆို ကြည့်ရှူနိုင်ပြီး၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ (၃) ခုထဲမှာ ကြိုက်ရာ အီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့် စိတ်ချစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
နစ်နေမန်း၏ ဘလော့များအား တင်ပြမည့် သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို အစရှိသည့် အမျိုးအစားများအပေါ် အခြေခံကာ ဘလော့သုံးခုအား အဆင်ပြေတွဲဘက်နိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။
နစ်နေမန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် တိုင်းပြည်အကျိုး ပြည်သူ့ အကျိုးကို ဦးတည်ကာ၊ အာဏာရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေးကိုသာ အဓိက လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပုဂ္ဂို လ်ရေးကိုမှ ထိခိုက်စေသည့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။ (မှတ်ချက် - အာဏာရှင်အုပ်စုနှင့် အမျိုးသားသစ္စာဖောက်များကိုမူ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် တော်လှန်တိုက်ဖျက်မည် ဖြစ်သည်)။
နစ်နေမန်းအပါအ၀င် အာဏာရှင်အား တော်လှန်နေကြသော သတင်းမီဒီယာများ၊ ဘလော့ပိုင်ရှင်များ၊ ဖိုရမ်များ၊ အီးမေးလ်အုပ်စုများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများအား ပြည်သူများမှ ဆထက်တံပိုး ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ကူညီကြပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
နစ်နေမန်း၏ ဘလော့များနှင့် သတင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် မိမိတို့ တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ကိုလည်း လေးစားစွာ ကမ်းလှမ်းကြိုဆို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
နစ်နေမန်း မွေးဖွားခြင်းသည် ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးအကျိုးအတွက် ဖြစ်သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အာဏာရှင်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေကြသော သတင်းမီဒီယာများ၊ ဘလော့ပိုင်ရှင်များ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ သတင်းရေးရာဆောင်ရွက်နေကြသူများနှင့် ညီအကိုမောင်နှမသဖွယ်၊ တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင် ရဲဘော်ရဲဘက် စိတ်ဓါတ်အရင်းခံကာ အပြန်အလှန် လက်တွဲရန် ဖြစ်ပါတယ်။
နစ်နေမန်းအား ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြသူများအားလုံးအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်နေကြသော မည်သူ့ မဆို၊ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်းမဆို နစ်နေမန်းမှ လေးစားလျက်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါတယ်။